တရုတ် Qingdao Effect စက် - ခါးစညျးရှေ့ဖုံးအမျိုးအစားပေါက်ကွဲမှုစက် Shot
ဒီစီးရီး, မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး, သံချေး romoving နှင့်အလယ်တန်းနှင့်အသေးစားသတ္တုများပုံသွန်း၏အသီးအသီးမျိုးမျက်နှာပြင်ပြင်းထန်မှုအသုံးပြုသည်
အတုလုပ်တဲ့နှင့်အလုပ်အကိုင်။ ဒါဟာ diffenent ထုတ်လုပ်မှုစကေးများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ပါသည်, တည်းသောအသုံးပြုမှုကိုမတ်တပ်ရပ်စေနိုင်သည်အများအပြား unitscan ဆက်စပ်နေသောနေရာများတွင်လည်းအသုံးပြုရ
စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ်ကိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ, သန့်ရှင်း-Up လိုင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုရေးသား။
Q32 စီးရီးလိမ့်ကျခြင်းခါးပတ်အမျိုးအစားရိုက်ချက် blasting စက်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်း၏အားသာချက်များ, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံမှာသေးငယ်တဲ့စွမ်းအင်ရှိပါတယ်
parameter ယူနစ် Q326 Q3210 QR3210
ထွက်နိုင်ရေး T က / H ကို 0.6-1.2 3-5 1.5-2.5
loading အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် 200 600 600
of One Piece ကီလိုဂရမ် 10 30 30
DIA: အကြိတ်စက်၏မီတာ မီလီမီတာ DIA: 650 DIA: 1000 DIA: 1000
ရရှိနိုင်စွမ်းဆောင်ရည် m³ 0,15 0.4 0.3
pill လှုံ့ဆျော Volume ကို ကီလိုဂရမ် / မိနစ် 100 250 250
Power က Air ကို Volume ကို m³ / h 2200 6000 5000
ပါဝါကိုလွန်ကျူး KW 12.6 32,6 24,3
outline အရွယ်အစား မီလီမီတာ * 1650 * 5800 3681 * 2926 * 5856 3644 * 2600 * 4768 3972
စက်စုစုပေါင်းအလေးချိန် ကီလိုဂရမ် 2340 5843 7400
စက် blasting ရိုက်ချက်အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ workpieces များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးစက်ကိုဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါအချက်အလက်အသေးစိတ်ညွှန်ပြပါ။
1. workpiece အဘယျသို့သောသငျသညျသနျ့ရှငျးရေး?
အများဆုံး workpiece ၏ 2. အဆိုပါ workpiece အရွယ်အစား, အရှည်, အကျယ်, အရပ်နှင့်အလေးချိန်။
3. တစ်နေ့လျှင်သင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များ (8 နာရီ) ကဘာလဲ?
သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားအသေးစိတျ workpiece ဓာတ်ပုံများပေးနိုငျပါလျှင်4င်းသည်ငါ၏အပျြောအပါးပါပဲ။
ယခင်: OEM/ODM China Sand Blasting Machines For Glass - Full Automatic Clay Sand And Green Sand Molding Machine And Line – Huaxin Group
နောက်တစ်ခု: စက် blasting ကြိတ်စက်အမျိုးအစား Shot